Iindaba zemeko yoBhubhane | Eyona
Iindaba Zemeko Yobhubhane
Ukususela ekuqaleni kowama-2020, isifo se-corona virus pneumonia seyenzekile kwilizwe lonke. Le bhubhani inokusasazeka ngokukhawuleza, uluhlu olubanzi, kunye nomonakalo omkhulu.Igama lamaTshayina lihlala ekhaya kwaye bangavumeli ukuphuma ngaphandle.Sikwenza nomsebenzi wethu ekhaya kwinyanga enye.
Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthintela ubhubhane ngexesha lemeko yobhubhane, bonke abasebenzi bomzi-mveliso bamanyene kwaye bakhuthele ekwenzeni umsebenzi onxulumene nokuthintelwa kobhubhane, kubandakanya nokulungiswa kwezinto ezahlukeneyo zokubulala iintsholongwane kunye neemveliso zokhuselo. Oko kuqhambuka, sithenga iintsholongwane eziyi-84 ukubulala iintsholongwane kwindawo yeofisi yonke imihla, kwaye izinto ezinje ngemipu yobushushu, iiglasi zokukhusela, iimaski kunye nezinye izinto kucwangciselwe ukuba zilungele umsebenzi wokuqalisa kwakhona. Sikwenza nomsebenzi weenkcukacha-manani womsebenzi ngamnye epakini ngexesha lemeko yendyikityha, nangokuchanekileyo ukuqiniseka ukuba imeko yokuhamba komsebenzi ngamnye. Sichaza ukuba abasebenzi mabanxibe imaski xa besiya kumzi-mveliso kwaye nangexesha lomsebenzi. Abasebenzi bezokhuseleko kufuneka benze umsebenzi wokhuselo ngononophelo, bangavumeli abasebenzi bangaphandle ukuba bangene epakini ngaphandle kweemeko ezizodwa; Nika ingqalelo inkqubela entsha yemeko ebhubhisayo mihla le. Ukuba ubungozi obufihliweyo bokhuseleko buye kwenzeka, amasebe afanelekileyo ayaziswa kwangexesha kwaye kufuneka enze awabo umsebenzi wokuzahlula.
Ekuqaleni kuka-Epreli, intsholongwane ye-corona yaqala ukusasazeka ivela e-Yurophu nase-Mid East apho abathengi bethu bahlala khona.Ngokujonga ukuba amazwe abo aswele iimaski, sithumela imaski kunye neigloves kubo mahala.Umthengi ngamnye unokuphila ngokukhuselekileyo ngeli xesha lobhubhane.
Okoko kwavela lo bhubhani, bonke abasebenzi benkampani yethu bathathe uthintelo kunye nolawulo lo bhubhane njenge njongo yabo eqhelekileyo, kwaye bamanyene ekuqinisekiseni ukuba bonke abasebenzi abakho bhubhani.
Ixesha lokuposa: Feb-25-2020